प्रकृति श्रेष्ठको प्रगति पढेर गर्व लाग्यो - प्रतिक्रिया - साप्ताहिक
विदेश पुगेर प्रकृति श्रेष्ठले हासिल गरेको प्रगति पढेर गर्व लाग्यो (सुगठित प्रकृति) । श्रेष्ठले नेपालीहरूको क्षमता, सीप एवं साहसलाई प्रमाणित गरेकी छिन् ।
- प्रकाश काफ्ले
नेपालमा त राजनैतिक दलहरूले पत्रकारिताकै दुरुपयोग गरिआएको पाइन्छ (यात्रा सन्दर्भ : समाचारको सिनेमा स्वरूप) । यहाँ फराकिलो हिसाबले काम गर्ने वातावरण छैन । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ‘इन्भेस्टिगेभिव फिल्म फेस्टिभल’ ले गर्दै आएको काम भने नमुना छ ।
- राजेश क्षेत्री
यो नयाँ कलाकारहरूले आफ्नो प्रतिभा देखाउने अवसर पनि हो (हलोविन एट पोखरा) । यो रमाइलो इभेन्ट रहेछ ।
यो भूतको कार्यक्रम भनेपछि मलाई सार्‍है डर लाग्छ (पहिलो विश्व : हलोविनको रौनक) । अरूलाई झुक्याउने–तर्साउने कस्तो पर्व होला यो ?
- रोज तामाङ
फरक स्वाद पाइयो (समय सन्दर्भ : म चोर हुँ ) । सारगर्भित लेख ।
- दिलबहादुर लामा
एक वर्ष अघिपछि जन्मिएकाहरूमा कसरी दुई वर्षको फरक हुन्छ (अभिनेत्रीहरूको उमेर) ? बक्लोल पनि कति बनाउन सकेको ?
- सरोज ढकाल
युवा ज्योतिष हरिहर अधिकारीको भविष्यवाणी फेल खाएको रेकर्ड छैन (अन्तरवार्ता : नेपालमा एउटा ठूलो धार्मिक क्रान्तिको सम्भावना देखिन्छ) । सम्भवत: धार्मिक क्रान्तिको सम्भावनासम्बन्धी यो भविष्यवाणी पनि मेल खान्छ ।
- विकास राई
नेपाली राजनीतिभन्दा त मोटु–पतलु नै ठीक (मोटु–पतलुको लोकप्रियता) । जब टेन्सन हुछ, तब मोटु–पतलु हेरिन्छ । केटाकेटीलाई हिन्दी भाषा सिकाउने गतिलो माध्यमसमेत भएको छ यो सिरिज ।
- ज्ञानु बूढामगर, रञ्जु लामा, मोतीलाल खरेल, प्रतीक्षा लावती, रूपा लामा, सरु नेवा, विशाल थारु
यो विषय त स्कुलस्तरमा पनि समावेश हुनुपर्ने हो (त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा योग शिक्षा) । विद्यार्थीहरूको शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्यसँग गाँसिएकाले यसलाई अनिवार्य विषयका रूपमा पठनपाठन गराउनु आवश्यक छ ।
- लालबहादुर थापा
संगीतकार शुकबहादुर गुरुङजस्ता स्रष्टालाई सबैले सहयोग पुर्‍याउनुपर्छ (म्युजिक डायरी : गुरुङलाई सहयोग) । लोकप्रिय गीतका सर्जकको सम्मान गर्नुपर्छ ।
- दीपक बम
यो फरक खालको प्रयोग हो (चर्चामा : गीतमा फरक स्वर) । यो प्रयोगमा कलाकारहरू सफल पनि छन् ।
- रुपक थापा
व्यापारिक रूपमा मात्र होइन, सामाजिक रूपमा समेत यसरी नै सहयोग पुर्‍याइदिए धेरैको कल्याण हुने थियो (कन्सर्टबाट सहयोग) । ग्रिन लियो क्लबबाट अरुले पनि सिकून् ।
- सबिना राई
परम्परागत पहिरन दीपिकालाई एकदमै सुहाएको छ (बलिउड गफ : दीपिकाको पहिरन) । यसमा उनको मेहनत पनि देखिन्छ । चलचित्र सार्वजनिक भएपछि धेरैको मन जित्ने निश्चित छ ।
- सुनिल श्रेष्ठ
राज्यलाई झकझक्याउने यस्ता काम गर्न जरुरी छ (ग्यालरी : तस्बिरमा नागरिकता समस्या) । यो सम्बन्धित निकायलाई सतर्क गराउने उपयुक्त माध्यमसमेत हो ।
- माला सापकोटा